यस्तो बन्दैछ भरतपोखरीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला ! « Pokhara Pati
खोज अनुसन्धानशिक्षास्वास्थ्यसूचना प्रविधिसाहित्यपर्यटनरोचक
यस्तो बन्दैछ भरतपोखरीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला !
प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन १५, बिहीबार
पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने भएको छ । पोखरा–३३ भरतपोखरीको पशुपतिघाटमा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको लगानीमा रंगशाला निर्माण गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रदेश सरकारले तयार गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले डीपीआर तयार गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये १६ लाख रुपैयाँमा बीआरएस इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालिले ४ महिनामा डीपीआर तयार गर्‍यो । डीपीआरमा रंगशाला निर्माण गर्न १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन छ । १ सय २३ रोपनीमा बन्ने रंगशालाको प्यारापिट क्षमता १८ हजार हुनेछ । मैदानमा टी–२०, एकदिवसीय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्ने गरी ७ वटा पिच बन्ने छन् । १ सय २० भीभीआईपी सिट, १ हजार २ सय भीआईपी र स्पेसल सिट, ९ सय जना खेलाडी अट्ने कक्ष, एक सय जना अट्ने मिडिया कक्ष रंगशालामा हुने छन् । ७० सवारी अट्ने भीआईपी पार्किङ, ४ सय क्षमताको गाडी पार्किङ र ६ सय वटा मोटरसाइकल अट्ने पार्किङ बनाइने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विशाल पुनमगरले काम सुरु भएर निरन्तर भइरहे ३२ महिनामा सक्ने गरी डिजाइन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले पशुपतिघाटको १ सय ७४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार गत पुसमा पाएको थियो । प्रदेशले संघबाट भोगाधिकार पाएको उक्त जग्गा नै पहिलो हो । यसअघि गत आर्थिक वर्षमा उक्त रंगशालाका लागि प्रदेशले छुट्याएको १ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद काफ्ले डीपीआर बनेपछि रंगशाला निर्माणको बाटो खुलेको बताउँछन् । उनले रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बनाउने प्रक्रियामा मन्त्रालय रहेको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले छुट्याएको २ करोड रुपैयाँबाट जग्गा संरक्षणको काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सेती नदीको कटान नियन्त्रण गर्ने, तारबार गर्ने, जग्गा सम्याउने काम गर्छौं ।’
रंगशालाको पश्चिमपट्टी सेती नदीले बर्सेनि कटान गर्छ । यस वर्ष केही बढी क्षति पुर्‍याएको काफ्लेले बताए । कटान नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाका २९ र ३३ नम्बर वडासँग समन्वय भइरहेको उनले जनाए । ‘रंगशाला बनाउनुअघि जग्गा संरक्षणका लागि छुट्टै डीपीआर बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जल उत्पन्न प्रकोप र भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका प्राविधिकको सहयोग लिन छलफल भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक भएकोले स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारले छलफल अगाडि बढाएको छ । ‘बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माण सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमा समेत जानुपर्ने भए त्यहीअनुसार अघि बढ्न पनि छलफल चलेको छ ।’ बजेटको सुनिश्चितता भए ३ देखि ४ वर्षमा निर्माण सकिने उनको अनुमान छ । यता, पोखरा रंगशालाभित्रको क्रिकेट मैदानमा संघ सरकारले गत आवमा छुट्याएको ३ करोड रुपैयाँ खर्चै हुन सकेन ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत पेभेलियन निर्माण, भित्री तारबार, ड्रेनेज, मैदान मर्मतका लागि बजेट छुट्याइएको भए पनि खर्च नभएको हो । मन्त्रालयले गत वर्षको चैत ८ मा टेण्डर आह्वानसमेत गरेको थियो । तीन कम्पनीले टेण्डर भरेका थिए । लकडाउन सुरु भएपछि टेण्डर खुल्नै पाएन । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले उक्त क्रिकेट मैदानलाई २५ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ ।
कास्की क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देल पोखरालाई क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय ‘भेन्यू’ बनाउन दुई मैदान आवश्यक पर्ने बताउँछन् । पोखरा रंगशालाको मैदानलाई समेत स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘दुई मैदान हुँदा एउटामा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी अर्कोमा खेलाडी अभ्यास स्थल बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रदेश सरकारको पहलले उत्साहित नै बनाएको छ ।’ @ईकान्तिपुरबाट
पोखरा २५ का विभिन्न ठाउँमा पहिरो जानुका साथै बस्ती डुबानमा
नेकपा (बहुमत) र जनसमाजवादी मञ्च नेपालबीच पार्टी एकता हुँदै !
५ वर्षीया बालिका बलात्कृत
विप्लव समुहका प्रभावसाली नेता पुन सहित ४ नेताले दिए राजिनामा : यस्तो छ कारण
बीमा समितिले लेखापरिक्षण नबुझाउने बीमा कम्पनीहरुलाई कार्वाही !
श्रीलंकाले देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेकाले देश टाट पल्टिएको घोषणा
लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल सिटिद्वारा बिद्यालयलाई भौतिक सामग्री सहयोग !
नेकपा(बहुमत) कास्कीका संयोजक सहित ६ जना गिरफ्तार !
बालेन्द्र साहले स्थानीय लोक्कल रक्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने
गेस्ट हाउसम बलात्कार पछि युवतीको सुन र नगद चोरेपछि..
पुर्ण चन्द्र न्यौपाने
सूचना विभाग दर्ता नंः : ३११७-२०७८/७९
पोखरापाटी मिडिया प्रालि द्वारा संचालित
पोखरा महानगरपालिका , कास्की
मोबाइल : +९७७- ९८४४९३०४४४, ९८४४९३२३४४, ९८४५५३३३३३
© pokharapati.com, All Rights Reserved.